I-PIX ne-CODEX Brands yokuhlanganisa ngaphansi kwe-X2X Media Group - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-PIX ne-CODEX Brands ukuyihlanganisa ngaphansi kweX2X Media Group
I-PIX ne-CODEX Brands ukuyihlanganisa ngaphansi kweX2X Media Group
I-PIX ne-CODEX bamemezele ukuthi lezi zinkampani zombili zizolethwa ngaphansi kobunikazi bomkhiqizo obunobunye ngokusungulwa kweX2X Media Group. Lokhu kuhlanganiswa komkhiqizo kuzoqinisa futhi ukulethwa kweQembu embonini yezokuzijabulisa, kuqinise idumela lezinkampani ezimbili zokwenza umsebenzi wokuphayona kanye namandla wobunjiniyela ngaphansi kwesambulela esisodwa ngenkathi kugcinwa ubunikazi bazo obuqinile nemizila yabo ezimele yokuthengisa.
"Selokhu i-PIX ithole i-CODEX ngo-Ephreli besisebenza kanzima," kusho uMarc Dando, oyiChief Design Officer, iX2X. "Ukusihlanganisa ndawonye, ​​ukuhlanganiswa njengophawu olulodwa kuyinkomba yezinga elihle kakhulu lokuzwana phakathi kwamaqembu futhi lokhu kuzophinde kufakwe kumathuluzi esiwaletha kubadali abakhokhelayo, kwabasebenza amafilimu nasezitudiyo emhlabeni jikelele."
I-X2X Media Group eholele:
Yinkampani yezobuchwepheshe yokuzijabulisa esebenzisana namakhasimende ukunika amandla ukugeleza kokudala kuwo wonke umjikelezo wokuphila wokukhiqiza.
Inikeza indawo yokuxhumana ephephile nezixazululo zokuphathwa kokuqukethwe.
Ihambisa amandla emigqa emibili yomklomelo womklomelo kanye namaqembu we-R&D.
Sizosebenza ekwakheni izixazululo ezintsha ezintsha ezivala igebe phakathi kokukhiqizwa kokusethiwe nposi.
"Isimo sokukhiqiza sishintsha ngokushesha, kanti nokuvela kwezinto zethu ezisetshenziswayo kubhekelela izidingo zangempela zomhlaba," kuphawula u-Eric Dachs, oyiChief Executive Officer, iX2X. "NjengeX2X Media Group, sizinikele ekuhlinzekeni imboni ngokushesha okukhulu, okuphephile, emhlabeni jikelele. kanye nemvelo esebenza ngokubambisana ethuthukisa ubuqambi kanye nokusebenza kahle kwezindleko. ”
Ikomkhulu leX2X lizohlala eSan Francisco, ngenkathi inkampani yandisa imisebenzi yayo yobunjiniyela eWellington, e-Odessa, eBudapest, eLondon, naseRoyal Leamington Spa, kanye namahhovisi athengisayo nawokweseka eNew York nase-New York nase-New York nase-New York nase-New York nase e-Los Angeles.
Imikhiqizo yethu ethola imiklomelo yezimboni zemidiya nezokuzijabulisa ifaka phakathi izixazululo zokukhiqiza kanye nokusebenza okuphezulu kokuqopha kanye namathuluzi wokuhamba komsebenzi ukusekela abathengisi bekhamera abaphambili bokufaka isici, ithelevishini, nokukhiqiza okuthengiswayo. Sinikezela ngezinsizakalo ezenzelwe umuntu uqobo ekubonakaleni kokukhiqiza okuvela ngokushesha. Siqinisekisa ukuqhubeka kokudala futhi sinciphise ubungozi bephrojekthi ngokuqinisekisa ukuthi imibono yabiwa kahle, igcinwe, futhi igcinwe kuyo yonke inqubo yokudala.
I-Codex ubuchwepheshe bokuzijabulisa UMarc Dando PIX Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi X2X	2019-11-08
Ngaphambilini: I-QYOU Media yakha ukusebenzisana kwe-Ethnic Channels Group eCanada
Olandelayo: I-NewTek TriCaster® Mini Brings UHD Digital Media Production kanye Ukusakazwa Ezikoleni, Amabhizinisi, kanye ne-Professional AV